Shaqadii Farxadda Badnayd |
Tuke Somalism, October 5, 2015
Buufiskii Xumaa Iyo Tiiraanyo Tahriib – Qeybtii 14aad
Khaalid Xaaji, October 21, 2017
Marka aad mas’uuliyad dawladeed bulshada u hayso, had iyo jeeraale dad dan kaa leh ama ay hiwaayadooda tahay in ay madaxda daba yaacaan. Oo agtaada ka buuxo oo jaanis kaaga inta badan kaa qaadaya. Waxaa kale oo jira qaar adiga kula waaweyn oo aad ixtiraam u hayso oo iyagana aad wakhtigaaga wax ka siiso. Balse waxa laga yaabaa in ay inta badan dayacmaan dadkii aad u baahnayd in aad u shaqayso oo ah danyarta, naafada iyo inta nugul.
Waxa kale oo iyana jira dadkii shaqadu u baahnayd oo meel ay kuu soo maraan waayay. Waad xanniban tahay oo waxaa ku xannibay dad magacyo waaweyn ama muraad shakhsi ah kaa leh.
Shaqadii iigu farxadda badnayd waxay ahayd mararka aan la kulmo dadkaa shaqada u baahan ee aan soo sheegay. Waa dad wax kasta oo aad u qabataa wax u tarayaan. Waa dad muuqaaga iyo dhexjooggaagu farxad u yahay. Waxaa la yidhaahdaa, had iyo jeer siyaasaddu waa wax dhaw oo maxalliya (Always politics is local), balse dhaxalka iyo madhaxu waa waxa dadka u baahan gaadha iyo waxa dalka u soo hadhaya. Waa hubaal oo dadka oo dhan mas’uul ayaad u tahay macaa kuwaa ku dabayaacaya iyo danaystaha, laakiin wixii midho fiican dadkaaga u leh ee mustaqbalka dalkaaga ku jiro ayaa muhiim ah in aad xoogga saarto.
Waxay ahaayeen maalmo si gaar ah iigu suntan markii aannu qorshaynay in aan agab waxbarasho, kombuyuuro iyo gaadiidka naafada ku qaybinno qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxaa ka soo xaadiray dad naafo ka ah laxaadka kala duwan oo runtii qiiro ku qabanayso marka aad dhegaysato sida ay u fekerayaan, siday kuula garnaqsanayaan ee adeeggaaga u naawilayeen iyo qaarkood hanka ku jira. Mid yar oo dhegaha ka naafo ah ayaa yidhi “Wasiir haddii aydaan xaalkayga ogayn, oo na afgaranayn, annaga yaa noo wasiir ah?!” Qalbiga ayaan ka ooyay, waxaanan isku xejiyay ilmada. Waxay kulamadaasi igu reebeen xasuus. Waxaa kale oo runtii xusuus murugo leh iyo qiiro i qabataa marka aan suuqyada ku arko mawjadaha dadka waalan iyo xadiga xuskoodu maqanyahay, kuwaas oo aan lahayn daryeel u gaar, iyada
oo aanaan ku guulaysan in aannu u samayno adeeg xiligii aannu xafiiska joognay. Wuxuu yidhi Axmed Keyse :
Dadkan waayuhu haysto Ee waxyeeladu gaadhay Ee waayey miyirkooda Ee habeenkii wareega Ee agteena ka wiileh Debad bay wadhanyiine Horta yaa ka wakiil ah Dadkan waalidu taabtay Ee ka wiiqan lexaadka
Ee aan wax sheegan karaynin Wuxuu waalid awoodo Baahidoodu ka weyne
Waa xilkii wadareede Horta yaa ka wakiil ah.
Tags: Shaqadii Farxadda Badnayd
Next post Dhacdooyinkii Shaqada iyo Xafiiska Gudihiisa
Previous post Mucaaradnimadii iyo Maxaafadnimadii